Ngwa nke jack base: A na-eji ya na ọkpọkọ nchara na scaffolds na usoro ihe owuwu iji dozie elu nke scaffolds na ọkpọkọ ọkpọkọ, nguzozi na-akwado ibu, na ibu ibu. A na-ejikarị ya eme ihe na usoro ihe owuwu nke iwuru ụlọ. Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ na njem njem atọ na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnụ ọgụgụ nke nkwado ụlọ emewokwa ọganihu ngwa ngwa. Nhazi nke nkata ulo: 1. Dika akuku ...
1.Introduction Luowen HDG etiti scaffolding gosiri oke ọrụ (675 n'arọ si) na adabara niile trades gụnyere: Bricklayers, demolition, ọkwa nkà, nkume masons, nchara fabricators wdg 2.Feature 1.Ọ bụ nnukwu ihe ọzọ maka ndị na-ewu ụlọ bụ ndị chọrọ ịzụta scaffold onwe ha na-azọpụta ego. 2.Ọ bụ arọ dị mfe - Super ọsọ ọsọ ka ọ kwụrụ - Otu onye nwere ike ịwụnye ya - Emegoro ya - Ihe niile na-azọpụta gị oge na ego. 3.Builders hụrụ ...
Kwikstage Scaffolding Standard ọ bụla nwere 500mm spigot na 'V'-Pressings dị na ebe 495mm ma nye ebe akara maka Ledgers na Transoms. Emebere Kwikstage dị ka ọkọlọtọ mba ụwa n'ime ISO 9002 gburugburu ebe obibi mmesi obi ike ma zọọ akara nchekwa maka njirimara na ebumnuche mmesi obi ike. Mfe na ọnụ ahịa dị irè nke naanị 4 isi ihe, na-enweghị akwa akwa, nchekwa, njem na mgbakọ nke Kwikstage bụ ihe ọzọ ...
1.Introduction Luowen Ring mkpọchi Scaffolding bụ ọhụrụ ụdị scaffolding, tumadi mejupụtara nke Ring efere, ọkọlọtọ, Ledger, nkwado na ngwa, ọ bụ nnọọ anabata na ụwa ahịa, n'ihi na nke uru na ọtụtụ ebe. 2.Feature 1.Simple Ọdịdị: Akụkụ ndị bụ isi gụnyere ọkọlọtọ, litger, ọ dị mfe ịgbakọta ma gbasasịa, dịkwa mfe nchekwa, nyefe ma debe ya. 2.Flexible na mwube: E nwere 8 oghere nke mgbanaka efere, otú ahụ litger na nkwado nwere ike itinye m ...
1.Introduction ： Luowen CupLock Scaffolding bụ ụdị ọhụrụ nke scaffolding, a na-enyocha ya, e mepụtara ma mepụtara na-ezo aka na teknụzụ mba ọzọ dị elu nke nkwonkwo na ngwa, dị mma na mma na ngwa. 2.Feature ： 1.Simple structure: Akụkụ ndị bụ isi gụnyere ọkọlọtọ, litger na nkwado, ọ dị mfe ịgbakọta ma gbasasịa, dịkwa mfe nchekwa, nyefe ma debe. 2.Safety na Kwụsie ike: The iko nwere ịghasa esemokwu na onwe ndọda, ọ nwere ike onwe-igbachi otu ebe, nke ...
H20 osisi beam (multilayer plywood nke web na plastik isi) Luowen H20 Timber Beam bụ nke dị arọ, oke mkpebi siri ike, magburu onwe ya na mmiri na-egbochi mmiri, acid-proof, alkali-proof, ezigbo straightness. Njirimara: 1 、 Ibu Ìhè: njupụta nke H20 Timber Beam bụ naanị 4.5kg kwa mita, ọ dị mfe ịnapụta 、 gbasasịa ma wụnye. 2 Nnukwu mkpebi: H20 Timber Beam adịghị mfe ịkwụsị n'ihi eriri. 3, Ezi nyocha: H20 osisi doo ezi na waterproofing, acidproofing, alkal ...
Akụkụ Ulo olu nke Ringlock, Metal Cuplock Scaffolding, Ringlock Scaffolding mgbodo, Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Kwikstage Scaffolding Ngwa,